Mayelana NATHI - ABS Zipper
Zhejiang Chuangfa Uziphu Technology Co., Ltd.
Ihlanganiswe ngokuphelele nomqondo wamanje wokucabanga kwe-Intanethi, kanye nokuhlanganiswa kwamakolishi wezingubo, izinsiza zokuklama izinto zokwakha, i-ABS igcine isikhundla esiholayo embonini ngokuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu nensizakalo. Njengomsebenzi wesimanje, sihlose ukuphishekela imiphumela yokuwina iwina kanye nokuthuthuka okuvamile. imikhiqizo main: uziphu, izinkinobho, izingxenye izingxenye.
INingizimu Melika, iNyakatho Melika, iYurophu, i-Southeast Asia, kanye nemakethe yasekhaya.
ngaphezu kuka-1200 amakhasimende asezingeni eliphezulu asekhaya nasemazweni aphesheya.
izingubo, izicathulo nezigqoko, izikhwama, usofa, okombhede, amatende, izikhwama zokulala, isambulela, izinto zokuhamba ezisetshenzisiwe.
Ohlwini lwemikhiqizo ephezulu engama-20 edumile emhlabeni. Emazweni ayi-102 ophawu lokuhweba olubhalisiwe i-ABS. Ngaphezu kwenani lamalungelo obunikazi bokusungula kazwelonke ali-100, amalungelo obunikazi bemodeli yokusetshenziswa. Ukwenza imisebenzi yocwaningo nentuthuko yomkhiqizo emisha yesifundazwe, kuyo kwenziwe imikhiqizo emisha emithathu ngokuhlonza isifundazwe. Imishini yokukhiqiza ehlakaniphile ukuqinisekisa ukusebenza kahle kokukhiqizwa, ikhwalithi yomkhiqizo ukufinyelela ezingeni laseYurophu.
Kusetshenziswa ubuchwepheshe be-Intanethi, ukuqaphela ukuthi akukho mehluko esikhathini seGlobalization. Ukuthengisa kwangaphambilini ukuhlinzeka amakhasimende ngentuthuko emisha yomkhiqizo, ukubonisana nezixazululo, ukuqeqeshwa kwezobuchwepheshe nezinye izinsizakalo ezenezelwe. Ngemuva kokuthengisa ukuhlinzeka ngosizo lobuchwepheshe kumakhasimende, izikhalazo zamakhasimende, iziphakamiso, impendulo nokuqinisekiswa kwekhwalithi nezinye izinsizakalo.